EyoMqungu 2018 | Gcina A Isitimela
Inyanga: EyoMqungu 2018
ekhaya > EyoMqungu 2018
Hotels Best Kufuphi Qeqesha ipetroli In Italy
yi Rachel luxolo
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu ElamaTaliyane, enye yezindawo zeholide kakhulu ethandwa eYurophu, likwazi konke. A ubutyebi bembali yenkcubeko, iihotele ngephambili, cuisine edumileyo, bokwakha, sites ubuhle bendalo ... kwaye ke kukho evenkileni! Ukuya Italy ngololiwe ngamava obumangalisayo. Ufumana ukonwabela lonke ubuhle bendalo…
Tips Top Ukuze Iindawo ezinika umdla eYurophu By Train In 2020
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Ojikelezayo eYurophu ngololiwe na isiko omdala ushukuxwa ukuba akayi ndawo ngokukhawuleza – Loliwe zezona ekhule, uninzi lwe-eco-friendly, kunye neyona ndlela isebenzayo yokuhamba usuka kwenye indawo uye kwenye. Nangona inkqubo yethu yetikiti likaloliwe isusa iintlungu ekuzilungiseleleni…
Kutheni ehamba ngololiwe Ingaba okusingqongileyo Friendly
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu izithuthi Uloliwe kakhulu okusingqongileyo-friendly indlela yokuya. Yi greenhouse effect ukukhutshwa kwegesi ngekhilomitha nganye kwizithuthi kaloliwe 80% ngaphantsi ezimotweni. Kwamanye amazwe, ngaphantsi ko 3% zonke izithuthi ukukhutshwa kwegesi avela koololiwe. Ekuphela kweendlela ezinokusingqongileyo…
Iingcebiso zokuhamba ze-Eco, Uhambo loLoliwe
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Bebesuka kumazwe ngamazwe, okanye isixeko ngemizi, ngamava emangalisayo ngokwenene yaye voyaging ngololiwe yenye yeendlela iphumelelayo yokwenza oku. yokuya apho ngololiwe yaseYurophu ezisekelwe ubukhulu becala umgama ohanjiweyo, kunjalo, iinkampani ezininzi zikaloliwe zaseYurophu ngoku zihambile…
5 Uninzi uhambo Ukuqeqesha Ehle In Italy
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu uhambo Ukuqeqesha Italy kukuthuthuzela nje kuphela kodwa ezinye izimvo encomekayo. Enye yezona zinto zibalaseleyo ukuthatha uloliwe Italy lithuba lokuba bajonge ubuhle mhle njengoko uhamba ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Kwezinye iindawo Italy,…